FAMPIANARANA TEKNIKA :: Tanora am-polony nahazo vatsim-pianarana avy amin’i Maraoka • AoRaha
FAMPIANARANA TEKNIKA Tanora am-polony nahazo vatsim-pianarana avy amin’i Maraoka
Nomen’ny Fanjakana maraokanina vatsim-pianarana ireo tanora malagasy sivy ambin’ny folo mianadahy avy ao amin’ny lisea teknika sy fanofanana araka asa miisa fito dia ny tao Alarobia, Mahamasina, Manjakandriana, Vontovorona, Tsiroanomandidy, Antsirabe, Toliara. Manana mari-pahaizana bakalôrea izy ireo, hianatra mandritra ny roa taona any Maraoka. Sampam-pianarana samihafa no horantovin’ireto mpianatra ireto any an-toerana.
“Hitondra ny fanevan’i Madagasikara any Maraoka ianareo. Horaisin’ny governemanta malagasy an-tanana ny fandehananareo any Maraoka sy ny fodiana eto Madagasikara. Manana tamberin’ andraikitra amin’ny vahoaka malagasy ianareo satria nahazo maimaim-poana dia hanome maimaim-poana ihany koa ho an’ny firenena”, hoy Rahantasoa Lydia Aimée, minisitry ny Fampianarana teknika sy fanofanana araka asa nitso-drano azy ireo. Fiaraha-miasan’ny Fanjakana malagasy amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy ny fanofanana araka asa sy ny Fanjakana maraokanina no nahazoana ity vatsim-pianarana ity. Sambany amin’ireto mpianatra ireto ny handranto fianarana any ivelany toy izao. “Isaorana ny fitondram-panjakana tamin’ny fandraisana andraikiny satria izay mihitsy aho vao hianatra ho any ivelany”, raha ny nambaran’i Faranala Henintsoa, mpianatry ny lisea teknika any Antsirabe, isan’ireo tsara vintana.
Amin’ny alahady ho avy izao no hihazo an’i Maraoka izy sivy ambin’ny folo mianadahy ireto. Mbola hitohy amin’ny taona manaraka kosa ny fanomezana vatsim-pianarana eo anivon’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy fanofanana araka asa.